Uchida Co. , Ltd. အလုပ်ခွင်တွင်းအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက် [Genvers] အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်း
Uchida Co. , Ltd. ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်အတွက်အလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက်များ | အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းအချိန်ပိုင်းအလုပ်
Uchida Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များ
★သင်တို့၌အတွေ့အကြုံမရှိသော်လည်းစိတ်ငြိမ်သက်မှုနှင့်စတင်နိုင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသည်။ဟုတ်ပါတယ်, အတွေ့အကြုံရှိလူ ဦး စားပေးကုသမှုခံရလိမ့်မည်နှင့်၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံကိုကောင်းစွာအသုံးပြုလိမ့်မည်!ပညာရေးနောက်ခံ၊ အသက်နှင့်ကျားမမလိုအပ်ပါ။Eco ကိုစိတ်ဝင်စားသူများအထူးသဖြင့်ကြိုဆိုကြသည်! ★ကျွန်ုပ်တို့သည်အလုပ်သမားများနှင့်ယာဉ်မောင်းများကိုသာမကတစ်ချိန်တည်းတွင် [အရောင်း] နှင့် [ရုံးလုပ်ငန်း ၀ န်ထမ်း] များကိုပါရှာဖွေနေသည်။သင့်အတွက်သင့်တော်တဲ့အလုပ်ရှိတယ်။
Uchida Co. , Ltd. အလုပ်အကိုင်အကျဉ်းချုပ်
●စက်မှုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း၊ ●အထွေထွေဆောက်လုပ်ရေး (မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ၊ ခုန်စသည်) ●လျှပ်စစ်ဂဟေ●သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း။
[စက်ရုံအလုပ်သမားများ] ယန်း ၁၀,၀၀၀ ~
①ကြီးမားသော Unic ကားတစ်စီး / ယန်း ၃၅၀,၀၀၀ မှ ၄၅၀,၀၀၀,၀၀၀
②အကြီးစားပစ္စည်းအော်ပရေတာ / ယန်း ၃၀၀,၀၀၀ မှ ၃၅၀,၀၀၀,၀၀၀
③ကြီးမားသောနောက်တွဲယာဉ် / ယန်း ၂၈၀,၀၀၀-၃၅၀,၀၀၀
t 300,000t unic car / 350,000-XNUMX yen
t ၄ တန်ကွန်တိန်နာကား၊ ၂၈၀,၀၀၀-၃၅၀,၀၀၀ ယန်း
⑥ 250,000t / 300,000t dump truck / ၂၅၀,၀၀၀-၃၀၀၀၀၀ ယန်း
[အရောင်း ၀ န်ထမ်း] ၃၀၀၀၀၀ မှ ၃၈၀,၀၀၀ ယန်းသို့မဟုတ်ထိုထက်မက
* စာရေး / အသေးစိတ်အင်တာဗျူးအတွက် ဦး စားပေးကုသမှု (ရုံးတင်စစ်ဆေးကာလရရှိနိုင်)
[Ageo ECO စင်တာ] ၁၁၁၉-၁ Ryoke၊ Ageo City, Saitama စီရင်စု
* JR Takasaki လိုင်းရှိ "Kita-Ageo ဘူတာ" နှင့် "Okegawa ဘူတာ" မှကားဖြင့်
★ JR Shonan-Shinjuku လိုင်း / Takasaki လိုင်း "Kita-Ageo ဘူတာ" "Okegawa ဘူတာ"
Uchida ကုမ္ပဏီလီမိတက်"ငါ Genvers ကိုမြင်တော်မူ၏"မင်းပြောတာကချောချောမွေ့မွေ့* လျှောက်လွှာနှင့်အလုပ်ကိစ္စများ မှလွဲ၍ အခြားစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများမပြုလုပ်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ ပြုလုပ်ပါ။
[စက်ရုံအလုပ်သမားများ၊ ယာဉ်မောင်းများ၊ အရောင်း ၀ န်ထမ်းများခန့်ထားခြင်း]
★သာယာလှပသောကုမ္ပဏီ၏အိမ်ရာနှင့်တစ်မူထူးသော၊ လုံခြုံသော၊ တည်ငြိမ်ပြီးကျေနပ်ရောင့်ရဲသောကုသမှုသာမကကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးမှာအလုပ်လုပ်သောသူများ၏ကောင်းမြတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အလုပ်ပြန်လုပ်တော့ "ပြန်လာကြပါ။ "နောက်ကျသွားပြီ။ အဆင်ပြေရဲ့လား။ ငါ့ကိုခေါ်နိုင်ရင်ငါပျော်မှာပါ ...
ဆုများနှင့် ၀ င်ငွေများအပြင်သင်ရနိုင်သောအရာများစွာရှိသည်။
your သင့်အရည်အချင်းများကိုအသုံးချရန်ခွင့်ပြုသည့်အလုပ်ပါ ၀ င်မှု။
အလယ်အလတ်ပရိုဆက်ဆာတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့လိုအပ်သည့်နေရာတွင်ပြန်လည်အသုံးပြုထားသောထုတ်ကုန်များကိုပေးသည်။ကျွန်ုပ်၏အလုပ်မှာအရေးကြီးသောစက်မှုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုသောထုတ်ကုန်များကို Ageo ECO စင်တာနှင့်ဖောက်သည်များသို့သယ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။
②အကြီးစားစက်ကိရိယာများ (combo, pay loader, forklift) အော်ပရေတာ
t XNUMXt unic ကား
t XNUMXt ကွန်တိန်နာကား
⑥ XNUMXt / XNUMXt dump ထရပ်ကား
သငျသညျစက်မှုဇုန်စွန့်ပစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစိုးရရုံးများနှင့်အဓိကအထွေထွေကန်ထရိုက်တာကုမ္ပဏီများမှသယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။အတွေ့အကြုံရှိသူများကို ဦး စားပေးကုသမှုပေးပြီးအတွေ့အကြုံမရှိကြသူများအားကြင်နာစွာသင်ကြားပို့ချပေးသည်။
[၂ / ၄ တန်လက်လိပ်]
[ကြီးမားသော Unic ကား / နောက်တွဲယာဉ်]
[အကြီးစားစက်ကိရိယာများ (Yumbo Payloader) အော်ပရေတာ]
★အတွေ့အကြုံရှိသောလူများအတွက် ဦး စားပေးကုသမှု
★အရည်အချင်းပြည့်မီသောလူများအတွက် ဦး စားပေးကုသမှု
★လိုင်စင်အမျိုးမျိုးလိုအပ်သည် (အလယ်အလတ်၊ အကြီးစား၊ ကားဆွဲလိုင်စင်စသည်)
* Unic လိုင်စင်သို့မဟုတ်ကြီးမားသောလိုင်စင်ရရှိထားသူများအတွက် ဦး စားပေးကုသမှု!
★ XNUMX: XNUMX-XNUMX: XNUMX (အမှန်တကယ်အလုပ်၏ XNUMX နာရီ)
* နေ့ပေါ် မူတည်၍ စောစီးစွာထွက်ခွာချိန်နှင့်အချိန်ပိုရှိနိုင်သည်။
★အလုပ်အ ၀ တ်အထည်များငှားရမ်းခြင်း
★ Fujimino City တွင်လှပသည်
ကုမ္ပဏီတည်နေရာ (ကိုယ်ပိုင်အခန်း၊ လေအေးပေးစက်၊ ရေချိုးခန်း) ရှိသည်။
★တနင်္ဂနွေနေ့များ၊ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များ၊ နွေရာသီ၊ ဆောင်းရာသီနှင့်အခြားကုမ္ပဏီစည်းမျဉ်းများ
★“ လူများနှင့်ကမ္ဘာမြေအတွက်ဖော်ရွေခြင်း” ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူ
၎င်းသည် Uchida ကုမ္ပဏီလီမိတက်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ရုံများမှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းမှတစ်ဆင့်သယံဇာတပြန်လည်အသုံးချခြင်းနှင့်ကမ္ဘာပတ် ၀ န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်သော Ageo City Ryoke (Ageo Ryoke Industrial Park တွင်) တွင်တည်ရှိသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
"မစွန့်ပစ်၊ မဖြည့်၊ မမီးရှို့နှင့်" ဟူသောယုံကြည်ချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၀၀% ပြန်လည်သန့်စင်ရန်ရည်မှန်းထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကြိတ်ခွဲစက်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ပြန်လည်အသုံးပြုမှုအပေါ်။
★လူတစ် ဦး ချင်းစီကိုပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ်မြှင့်တင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ထမ်းများအားပုံမှန်အိမ်တွင်းလေ့လာမှုအစည်းအဝေးများကျင်းပခြင်းနှင့်ပြင်ပဆွေးနွေးပွဲများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းအားဖြင့် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ချင်းစီသည်စက်မှုလုပ်ငန်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းအပါအ ၀ င်နယ်ပယ်တစ်ခုစီတွင်ကျွမ်းကျင်သောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အဖြစ်ကြီးထွားလာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပညာရှင်များကိုသင်ကြားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အချင်းအမျိုးမျိုးရရှိမှုကိုထောက်ပံ့ရန်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ပြီး ၀ န်ထမ်း ၂၀၀ ကျော်သည်အရည်အချင်းပြည့်ဝပြီးတက်ကြွလာကြသည်။သင်၏ကိုယ်ပိုင်ခြေလှမ်းသစ်ကို ဦး တည်စေသောပတ်ဝန်းကျင်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အတွေ့အကြုံမရှိသူများပင်စိတ်ငြိမ်သက်မှုဖြင့်စတင်နိုင်သည်
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီတွင်နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသောကြောင့်တည်ငြိမ်သောအလုပ်ပမာဏရှိသည်။ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုဖူလုံရေးအာမခံ၊ လစာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အပိုဆုကြေးများအပြင် ၀ န်ထမ်းဆောင်များ (ပုဂ္ဂလိကခန်းများ၊ လေအေးပေးစက်နှင့်ရေချိုးခန်းများ) ရှိသည်!အိမ်တွင်းပြက္ခဒိန်တွင်အားလပ်ရက်များစွာရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Saitama Prefecture မှအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည့်အလုပ်ခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပြီး၊ငါသက်သောင့်သက်သာအလုပ်ခွင်ကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစား!
1119-1 Ryoke, Ageo City, Saitama စီရင်စု
ပထမ ဦး စွာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်မေးခွန်းများနှင့်အကြံဥာဏ်များကိုတုံ့ပြန်ပါမည်။
1119-1 Ryoke, Ageo City, Saitama Prefecture မြေပုံကိုကြည့်ပါ
ဟူးဂျူ (Kuki)၊ အတွေ့အကြုံမရှိသောကြိုဆိုခြင်း
Uchida ကုမ္ပဏီလီမိတက်※"ငါ Genvers ကိုမြင်တော်မူ၏"မင်းပြောတာကချောချောမွေ့မွေ့* လျှောက်လွှာနှင့်အလုပ်ကိစ္စများ မှလွဲ၍ အခြားစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများမပြုလုပ်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ ပြုလုပ်ပါ။